Anisan'izany ny Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, The Dead Sea, Ha Long Bay
Home » Lahatsoratra farany farany » Travel Travel » Anisan'izany ny Niagara Falls, Grand Canyon, Sahara, Mount Everest, The Dead Sea, Ha Long Bay
Travel Travel • Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovao • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Sary: lzf / Shutterstock
Miaraka amin'ny firenena sasany manomboka manainga fameperana ho an'ireo mpandeha vita vaksiny, Instagram Hashtags ho an'ny zava-mahatalanjona voajanahary malaza dia manondro ny faniriana hitsangatsangana mpizahatany. Orinasa iray any Angletera mifampiraharaha amin'ny tahiry angovo namoaka tatitra.
Ny amerikana, eoropeanina, sinoa, mpitsangatsangana japoney dia manisa ny andro hamerenana hijery an'izao tontolo izao indray amin'ny zava-misy COVID-19 taloha.
Hash Tags ao amin'ny Instagram dia famantarana tsara izay mety te-handeha indray ireo mpandeha, ary Niagara Falls manamorona ny Yosemite Park sy ny Grand Canyon no lohalaharana amin'ny lisitra
Mampalahelo fa ny Piramida Lehibe an'i Giza dia nahazo Hashtag farafahakeliny tao amin'ny Instagram nandritra ny krizy mitohy, fa raha tsaraina ny lazan'ny piramida dia hiova izany, raha vao misokatra izao tontolo izao
Toerana tsy dia irina loatra amin'ny fitsangatsanganana fizahan-tany COVID dia toerana itodiana toa ny Mount Kilimanjaro, ary ny Riandranon'i Victoria. Ity ligy ity ihany no vonona hiakatra ny tohatra Instagram toa ny Nosy Komodo, Angel Falls any Venezoelà na ny Great Barrier Reef any Aostralia.
Ny hamaroan'ny vaksiny any Etazonia, miaraka amin'ny fanokafana indray ny firenena amin'ny fitsangatsanganana an-trano, dia namerina ny lalana ireo mpizahatany amerikana ary hita izany.
Misokatra ho an'ny mpitsidika ihany koa i Islandy ary nanjary ankafizin'ireo nandefa ny Instagram ny Jiro Avaratra.
Mount Everest any Nepal dia mijanona ho toerana majika ho an'ny Instagram. Fampisehoana lamaody ho avy eo an-tampon'ny tampon'ny avo indrindra eto an-tany dia hanampy Guinness World Record amin'ity sary ity.
Ny zava-mahatalanjona voajanahary voajanahary indrindra amin'izao fotoana izao dia:
Fahagagana voajanahary malaza indrindra Firenena
#1 Niagara Falls Kanada / Etazonia 5,762,714
#4 Aurora Borealis / Jiro Avaratra Islandy 3,362,055
#5 Ny Sahara Afrika Avaratra 2,661,348
#6 Nosy Galapagos Ekoatera 2,012,669
#7 Mount Everest Sina / Nepal 1,793,316
#8 Danube Delta Romania 1,499,237
#9 Ny Ranomasina Maty Jordania / Israel 1,288,628
#10 Ha Long Bay i Vietnam 1,269,970
Ny fahagagana voajanahary ary liana indrindra amin'ny Instagram dia Niagara Falls, miorina amin'ny boarder an'i Canada sy Etazonia, miaraka amin'ny mihoatra Tenifototra 5.7 tapitrisa amin'ny Instagram.
Valan-javaboary Yosemite, Etazonia
Sary: Andrew Opila / Shutterstock
Voahosotra ho fahagagana voajanahary Instagrammable indrindra eto amin'izao tontolo izao ny Valan-javaboary Yosemite satria tsy nahalala afa-tsy tenifototra Instagram 5,000,000 tao amin'ny fampiharana media sosialy malaza.
Natao hisolo tena ny hery, fikirizana ary fitoniana, ny Valan-javaboary Yosemite any Amerika dia fonenan'ny zava-mahatalanjona an-jatony metatra toradroa, manomboka amin'ny riandrano mahafinaritra ka hatrany amin'ny ala sy lohasaha mahavariana. Ireo izay mitsidika ny fahagagana voajanahary dia mameno ny sakafony amin'ny sary mitazana ireo glacier sy haavo mahatahotra nefa mahasarika. Miaraka amin'ilay sary fampakaram-bady sy fampakaram-bady tsindraindray natsipy tany dia toa toerana mety indrindra i Yosemite ho an'ny tolo-kevitra tsy hay hadinoina sy fitifirana voady.
Ny fametrahana azy ho toy ny zava-mahatalanjona faharoa voajanahary azo tanterahina eto amin'izao tontolo izao, Niagara Falls dia nahangona tenifototra 4,607,444 mahavariana tao amin'ny Instagram.
Miaraka amin'ny tranoben'ny fizahan-tany be dia be manodidina ny faritra, an'arivony maro no mirohondrohona mankamin'ny tsangambato kanadianina isan'andro hahita ny riandrano kristaly miboiboika eo ary mamely paosy manoloana ny riandrano faharoa avo indrindra eto an-tany.
Grand Canyon, Etazonia
Sary: Jim Mallouk / Shutterstock
Noforonina ho "fahitana iray lehibe indrindra tokony ho hitan'ny Amerikanina rehetra" avy amin'i Teddy Roosevelt, tsy mahagaga raha mametraka ny Grand Canyon ho fahagagana voajanahary Instagrammable fahatelo indrindra eto an-tany.
Amin'ny halavirana 277 kilaometatra, ny fahagagana malaza malaza dia tsidihin'ireo mpizahatany 6 tapitrisa eo ho eo isan-taona, ka tsy mahagaga raha ny fizaran-tany ombre mafana dia efa noheverina hashtag mihoatra ny 4,000,000 ao amin'ny Instagram hatreto. Voasokitra kanto amin'ny natiora, ny Grand Canyon dia malaza amin'ny maha-iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary mandondona indrindra eto an-tany.
Tany Efitra Sahara, Afrika
Ilay efitra efitra voalohany ao amin'ilay lisitra, ny Sahara dia nahazo ny anaram-boninahitra ny zava-mahatalanjona fahaefatra voajanahary Instagrammable indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny tenifototra Instagram maherin'ny 2,200,000.
Mandritra ny 8,600,000 11 kilaometatra toradroa mahavariana, ny Sahara dia mifandray amin'ny firenena afrikanina 70 ary mandrafitra ny ampahatelon'ny kaontinanta iray manontolo! Ny havoana mahavariana dia fonenan'ny biby mampinono XNUMX mahery, kanefa ny fahagagana voajanahary dia mitoetra ho malaza noho ny fahanginany mangina sy ny filaminana milamina.
Sary: aaltair / Shutterstock
Ny Delta Danube any Romania dia nanangona ireo zava-mahatalanjona voajanahary Instagram be mpahazo indrindra dimy, nahazo 1,638,573 tamin'ny Instagram.
Ny faharoa lehibe indrindra amin'ny karazany any Eropa, ny Danube River Delta dia endrika an-tanety namboarina avy amin'ny antsanga napetraka entin'ny ony mankamin'ny ranomasina manodidina. Ny renirano manga mamirapiratra dia mahasarika mpizahatany maro, maro amin'izy ireo no manoratra ny fitsidihany azy ireo miaraka amin'ny sarin'ny Instagram tsy maintsy andefasana sambo miala sasatra na amin'ny fisamborana ny bibidia manodidina azy.
Nosy Galapagos, Ekoatera
Tsy nahatratra ny dimy voalohany, ny Nosy Galapagos dia nametraka ny zava-mahatalanjona fahenina voajanahary Instagrammable indrindra, miaraka amin'ny 1,612,457 XNUMX XNUMX tenifototra avy amin'ny mpitsidika.
Miorina any Ekoatera, ny Nosy Galapagos dia tranon'ny hetsika volkano marobe ary fantatry ny besinimaro amin'ny filazan'izy ireo ny teôlisiona nivoakan'i Darwin. Ankoatra izany, ny Nosy Galapagos dia eo akaikin'ny ekoatera, izay midika fa afaka mankafy toetrandro mafana ny vahiny mandritra ny taona!
Raha ny nosy aza dia manao toerana mahavariana, maro ny sary med Instagram ny zava-mahatalanjona voajanahary mampiseho ireo zavaboary an-dranomasina teraana hita ao, ka mahatonga ity zavaboary voajanahary ity ho toerana lavorary ho an'ireo izay tia biby dia!
Sary: sanyanwuji / Shutterstock
Voahosotra ho zava-mahagaga voajanahary malaza indrindra faha-1,243,473 ao amin'ny Instagram i Ha Long Bay any Vietnam, izay nomena fehezanteny nahagaga fa XNUMX XNUMX XNUMX.
Manolotra lava-bato mahafinaritra sy fizaran-tany amoron-dranomasina sokitra amin'ny vatosokay ny mpizaha tany, Ha Long Bay dia toerana malaza indrindra amin'ny fiakarana, ny fisitrihana scuba ary ny fitsangantsanganana. Miaraka amin'ny bibidia an-dranomasina marobe sy tilikambo vatosokitra voahosotra, ny fananganana voajanahary an'i Ha Long Bay dia mamorona tora-pasika tonga lafatra ho an'ireo mpitsidika mitady hanatsara ny sakafony.
Aurora Borealis, Islandy
Fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Jiro Avaratra, ny Aurora Borealis any Islandy dia nahazo ny anaram-boninahitra fahagagana voajanahary be indrindra azo lazaina ho valo eto an-tany, nahazo 1,167,915 XNUMX XNUMX ny tenifototra amin'izao fotoana izao.
Nomena ny andriamanibavy romana tamin'ny mangiran-dratsy, ny lanitry ny Aurora Borealis dia asehon'ny fampisehoana hazavana mahatalanjona amin'ny alina maizina sy mangatsiaka. Na dia tsy azo vinavinaina aza, ireo mpizahatany izay tsara vintana hijoro ho vavolombelona amin'ilay zava-niseho iray amin'ireo zava-mahatalanjona voajanahary tsara indrindra eto an-tany, miaraka amina renirano mandihy mamiratra manerana ny lanitra madio.
Noho ny fisian'ny jiro avaratra raha tsy misy fepetra mifanaraka aminy dia tsy mahagaga raha Aurora Borealis no manangona tenifototra vitsy kokoa noho ny zava-mahatalanjona voajanahary hafa!
Mount Everest, Sina / Nepal
Sary: Anton Rogozin / Shutterstock
Miaraka amin'ny tenifototra Instagram miisa 1,125,527 amin'ny ankapobeny, Mount Everest no voatondro ho zava-mahatalanjona fahasivy faran'izay natoraly Instagram eto an-tany.
Amin'ny maha-tendrombohitra avo indrindra eto an-tany azy, mijoro eo amin'ny 29,000 metatra ny halavany, ny Mount Everest dia iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra eto an-tany. Vonona ny hisambotra ireo havoana mahafinaritra, ireo mpitsidika maka matetika amin'ny Instagram hizara ny fomba fijery manaitra.
Mametraka tery amin'ny top 10 misy 900,429hashtags i Pamukkale any Torkia no fahagagana voajanahary Instagramed fahafolo indrindra eto an-tany, manakatona ny lisitra.
Miaraka amin'ny ravina vatosokay fotsy misy ranomandry, terraces mamiratra, ary ranomasina misy ronono, ny kamory mafana ao Pamukkale dia manintona ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao ary malaza be amin'ny Instagrammers mitady hanatsara ny hakanton'izy ireo ny fahana.
Mandritra izany fotoana izany, ireo mari-tany mahavariana toa ny Nosy Komodo, ny Great Barrier Reef ary ny Cliff of Moher dia samy nipetraka teo amin'ny toerana folo voalohany, nahazo 83,569 817,956, 635,073 XNUMX ary XNUMX tsirairay avy.
Carnival Cruise Line hamerenana indray ireo sambo fanampiny ao ...
Ny komity mpanatanteraka Airbus dia miantso ny lefitra mpanatanteraka vaovao ...